जान्नुहोस् औँलामा कति वटा च्रक हुने मान्छे भविष्यमा कस्तो ? कति शंकको फल के ? – Jagaran Nepal
औलाहरूको र औठाको टुप्पोमा जुन भुमरी झै घुमेको हुन्छ त्यसलाई चक्र भनिन्छ। जुन व्यक्तिको औंलामा यस्तो प्रकारको चक्र छ भने जातकको धार्मिक प्रवृत्तिको र धर्ममा जोडिएको कार्यमा विशेष रुचि हुन्छ। साथै ऐर्श्वर्यद्वारा पुर्ण उत्तमजीवन विताउँदछन्। यस्ता व्यक्तिहरू रहस्यमय, व्यवहारिक विचार बला बनाउनुको साथै अनुसन्धान र नयाँ विचारको जन्म दिनेखालको हुन्छन्।
चक्रको औला अनुसार फल
१ औठामा(बुडि औँला) चक्र छ भने : जातकलाई पैत्रृक सम्पत्तिको सुख मिल्छ र त्यस सम्पत्तिलाई बृद्धि गर्ने हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू श्रेष्ठ गुणको स्वामी हुनुको साथै कठिन कार्य गर्नको लागि सधै तत्पर रहन्छ र ऐर्श्वर्यद्वारा पुरा जीवन यापन गर्दछ।
२. औठा एवम् तर्जनी (चोर औँला) औलामा चक्र भएमा : जातकले समाजमा धन, यश, सम्मान प्राप्त गर्दछन् र प्रत्येक इच्छा पुर्ण हुन्छ।
३. तर्जनी औलाको अग्रभागमा चक्र छ भने : जुन व्यक्तिको औलामा यस्तो चिन्ह छ त्यस व्यक्तिले माता -पिता, भाई बन्धुद्वारा धन सम्पत्ति प्राप्त गर्दछ । व्यवसायी, राजनेता, चिकित्सक यस श्रेणीमा पर्दछन् । जातकले कार्य कुशल एवम् इश्वरमा आस्था र विश्वास राख्नेवाला हुन्छ।
४.मध्यमामाझी (औँला) औलाको टुप्पोमा चक्र भएमा: जातकलाई धार्मिक कार्यद्वारा धनलाभ गर्नुका साथै धार्मिक नेता या पुजारी हुन्छ ।
५.अनामिका औलामा चक्र छ भने : त्यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो मित्र वगद्वारा धनलाभ हुनुका साथै व्यापारबाट लाभान्वित हुन्छ।
६.अनामिका एवम् तर्जनी औलामा चक्र भएमा : जातक व्यवहारिक एवम् स्नेहशील हुन्छ।
७. कनिष्ठ (कान्छी) : औलामा चक्र छ भनेःयस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यवसायद्वारा धन प्राप्ति गर्दछन्। जातक शास्त्रको ज्ञाता हुनुको साथै लेखन कार्यमा निपुण हुन्छन्।
यदि सम्पुर्ण औलाहरूको टुप्पोमा चक्र छ भने जातकलाई भाग्यशाली, यशस्वी एवम् वाकपटु र सुखी बनाउँदछ। यदि चन्द्र पर्वतमा चक्रको चिन्ह छ भने स्जातक जातिकालाई पानीमा डुब्ने वा पानीको भय र अत्याधिक टाउको दुःख्ने समसयले जीवनभरि सताईरहन्छ।
चक्र संख्या अनुसारको फल :
१.एक चक्र भएमा: जातक वीर, सुखीजिवन विताउनुका साथै चतुर हुन्छ ।
२.दुई चक्र छ भने: अति सुन्दर र सम्मानित व्यक्ति बन्छ
३.तीन चक्र भएमा: धनी, विलासी हुन्छ ।
४.चार चक्र छ भने: धनहीनता, दुरदर्शिता हुन्छ ।
५.पाँच चक्र भएमा: सुखको उपभोग र ज्ञानी हुन्छ ।
६.छ चक्र भएको छ भने: काम भावनामा तृप्ति वा सन्तुष्टि, दक्ष हुन्छ ।
७.सात चक्र छ भने: सदाचारी लेक, वनजंगल र पहाडी क्षेत्रमा घुम्न मन पराउनेवाला ।
८.आठ चक्र भएमा: विरामी बाट हुन्छ ।
९.नौ चक्र छ भने: सौभाग्यशाली हुन्छ ।
१.दश चक्र भएमा : आत्म ज्ञानी र महावली प्रभु हुन्छन् ।